Oreo update ရောက်ရှိလာမှာမဟုတ်တော့တဲ့ Honor 8! – AsiaApps
January 16, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Oreo update ရောက်ရှိလာမှာမဟုတ်တော့တဲ့ Honor 8!
Android ရဲ့နောက်ဆုံး version ဖြစ်တဲ့ Oreo ဟာ Honor 8 ဆီရောက်ရှိလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ Honor India ရဲ့ အသုံးပြုသူကို ပြန်တဲ့ reply တစ်ခုကနေသိရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
Honor India ပြောထားတာကတော့ Android Oreo update ဟာ Honor 8 device နဲ့ မကိုက်ညီလို့ပါတဲ့။ Honor 8 အသုံးပြုသူတွေထဲက version အသစ်စောင့်မျှော်နေသူတွေအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုလို့ပဲဆိုရမှာပါ။ Honor 8 အတွက် Oreo update ရောက်လာတော့မှာမဟုတ်ပေမယ့် Honor 8 Pro အတွက်တော့ Oreo update ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Dear Fan, we would like to inform you that we have started registration for the Beta version of Android Oreo update in Honor 8 Pro. Further, you may register for the same and may refer the link:
Honor 8 Pro ရဲ့ Oreo update အတွက် Beta version ကတော့ထွက်ရှိပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
Android, Firmware Updates, Honor, Huawei